Wed, Feb 21, 2018 | 11:10:32 NST
16:15 PM (6 months ago)
नारायण श्रेष्ठ / कतार
प्रश्नः म कतारबाट दुई महिनाको छुट्टिमा घर आउदै छुँ। मैले कम्पनीसँग चार महिनाको छुट्टि मागेको थिए, तर दिएन। यदि काम पर्‍यो भने मैले नेपालबाट समय थप्न सक्छु ? सकिन्छ भने कति समय थप्न मिल्छ र कति पैसा लाग्छ ? कहाँ जानुपर्छ ? के के चाहिन्छ ?
उत्तरः नेपाल आएपछि केही काम पर्दा थप छुट्टि लिन नसकिने भन्ने होइन। बिदा बस्नुपर्ने कारण खुलाएमा कम्पनीले छुट्टि थप्न सक्छ। तर कम्पनीले छुट्टि अनिवार्य रुपमा थप्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुन्न। तपाईं र विदेशको कम्पनीको समझदारीका आधारमा बिदा दिने नदिने कुरा भर पर्छ। पैसा तिरेपछि छुट्टि पाइन्छ भन्ने चाहिँ होइन।